Ọkachamara ọkachamara nke ihe nduku nduku - Magazin "Usoro nduku"
Isi Injinia / Teknụzụ
в Injinia / Teknụzụ
S.A. Banadysev, Dọkịta nke Sciences nke Ọrụ Ugbo, SSC Doka-Gene
Ọganihu ngwa ngwa, uto ngwa ngwa na ịkọpụta otu ihe edo edo bụ ihe ndị dị mkpa dị mkpa maka mkpụrụ nduku dị elu. Nga germination enyere aka ike ọnọdụ ndị a, na-akwalite guzobe ọzọ-epulite ma Ome ọ bụla tuber, nke enwekwu aku na uba nke akuku ihe onwunwe. A na-atụ aro mmepe ngwa ngwa maka igbochi ọrịa na igbo igbo. N'ihi na ripening mbụ ma ọ bụrụ na ọ nwere ọrịa na-efe efe, ihe mbụ iwepụ n'elu ga-ekwe omume. Mmetụta ikpeazụ nke ịba ụba mkpụrụ site na germination nwere ike iru 10-15%, na-eme ka owuwe ihe ubi oge mbụ - ruo izu abụọ, nke na-enye nnukwu ego ọzọ mgbe erere ya na ọnụahịa dị elu karịa. Uru nke tupu germination na-n'ụzọ zuru ezu na-erigbu mgbe akuku ihe onwunwe na-emegharị ka kpọmkwem na-eto eto na ọnọdụ na nzube. Nkwadebe ihe nduku nkpuru maka akuku kwesiri ime ihe na-echebara ogo ya, onodu ogwu, oke ya na iche iche nke mmeputa.
Ọnọdụ physiological nke mkpụrụ osisi ahụ bụ nke kachasị mkpa, ebe ọ bụ na ọ na-ekpebi ike na njirimara nke uto nduku n'oge oge uto. Osisi sitere na nkpuru ahihia di iche-iche di iche-iche na emeputa. Okenye tubed na-eto ngwa ngwa, ma na-enye mkpụrụ dị elu n'oge. N'otu oge ahụ, ịdị elu nke osisi, mpaghara nke epupụta, nnukwu tubers dị obere, ọnụ ọgụgụ nke ị ga na tubers ka ukwuu. Na physiological afọ mkpụrụ tubers na-adabere ná mkpụrụ ndụ ihe nketa e ji mara nke iche iche, ole okpomọkụ etinye obi gị dum site tuber na nrụgide n'oge cultivation na nchekwa, nke na-emetụta esịtidem n'ihi mmiri ọgwụ, karịsịa ruru na larịị nke homonụ. Nchegbu dị n'ọhịa bụ isi mmiri, okpomọkụ, nri, pathogens na mmebi igwe, n'oge nchekwa - ọnọdụ okpomọkụ, iru mmiri, ikuku, ọnya na ọrịa. Physiological ịka nká nke tubers etịbe ofụri na-eto eto n'oge, ma ihe nakawa etu esi nke usoro a na-anaghị eme nke ọma na-amụ na-apụghị quantified. N'otu oge ahụ, a maara ọtụtụ atụmatụ. N'ihi ya, tubers osisi nke nwụrụ nká, dị ka a na-achị, bụ ndị physiologically okenye. Igwe ikuku dị elu na ọnọdụ akọrọ na ala aja nwere ike ịkpalite mkpụrụ germination ọbụna tupu owuwe ihe ubi. Otú ọ dị, isi ịka nká nke mkpụrụ tubers na-eme n'oge nchekwa n'ihi oke okpomọkụ na iru mmiri, bruises, peeling nke bee, nkọ nkọ na microclimate parameters, na mmepe nke ọrịa. N'ihi ya, site na oge nke akuku, tubers nwere ike ịbụ na otu nke ise na-ekwu: miri dormancy, apical dominance, otutu germination, branching, na-eto n'ime obere tubers - lee foto.
Easiestzọ kachasị mfe iji chọpụta ihe gbasara physiological steeti tubers bụ germination germination. Maka nke a, ihe nlele na-ahụkarị tubers na-erikpu ihe karịrị 10 n'arọ ọnwa abụọ tupu a kọọ ihe ọkụkụ n'ọchịchịrị na ọnọdụ okpomọkụ dị ka 20 оC. Mgbe izu abụọ ma ọ bụ atọ gasịrị, ọdịiche dị n'etiti iche na ogbe ghọrọ ihe pụtara ìhè na ọnụọgụ na ọdịdị epulite. Ọnụ ọgụgụ nke anya epulite na-enye anyị ohere ịbịaru nkwubi okwu banyere afọ ọmụmụ nke tubers na mgbanwe ndị dị mkpa na nkwadebe maka akuku. Ibido nwayọ nke germination pụtara ọnọdụ na-ehi ụra, a chọrọ ịwụ elu okpomọkụ maka germination. Njikere ngwa ngwa maka germination - dormancy agbajiworị, na mmalite nke germination, ala germination okpomọkụ zuru oke. Germination nke ihe karịrị 50% nke anya bụ njirimara nke ihe ọkụkụ physiologically okenye. Ekwesịrị ịtụ anya na ọnụ ọgụgụ dị elu nke ị ga-esi na ya pụta, mana ịkwadebe nkwalite ọzọ na ịmị mkpụrụ kwesịrị ime na obere okpomọkụ iji gbochie mmetụta ịka nká na-achọghị. Germination nke na-erughị 50% nke anya bụ ihe ịrịba ama nke tuber na-eto eto. Obere obere ị ga na tubers buru ibu nwere ike ịtụ anya, mana nkwadebe maka akuku kwesịrị ịmalite na mbụ.
Na Germany, emeputala akara maka physiological steeti tubers nduku - lee okpokoro.
Isiokwu. Ntụle nke physiological ala nduku mkpụrụ ihe
Ngosipụta Ngụsị akwụkwọ Akara
Typedị ala Oyi, udu 0
Ọkụ, kpọọ nkụ 5
Ihu igwe mgbe a kụrụ ihe Oyi, udu 0
Ọkụ, kpọrọ nkụ (ụbọchị 3 karịa 25оC na crest) 25
Ofbọchị nhicha Na mmalite 0
Ogo Tuber M 0
Nchekwa okpomọkụ N'okpuru 4оС 0
N’agbata 4 na 7 оС 10
Nke asaaоС 25
Nnukwu Nchekwa Akpa Ruo ụbọchị iri 0
10 ruo ụbọchị 20 5
Ihe karịrị ụbọchị iri abụọ 10
Ofufe nke anya Ọ dịghị 0
E nwere 5
Emebiri emebi 10
Rizctoniosis Ọ dịghị 0
Ọ bụ 10
Turgor tuber elu 0
Oge izu ike nke ihe dị iche iche. Ogologo 5
Ọ bụrụ na otu ogbe nduku rite aka 50 isi - akuku tubers ndị dịtụ na-eto eto, 50-70 isi - na akuku tubers nwere nkezi afọ ndụ. Ka ọnụọgụ ndị enwetara karịrị 100, nke ahụ anaghị enyekwu nsogbu banyere usoro nchịkwa ahụ.
Isi ihe na-emetụta germin nduku:
- nchekwa nchekwa 3-5 Celsius C na-akwalite ọtụtụ germination (ịgha mkpụrụ, nchekwa na tupu germination nke poteto ụlọ ọrụ.);
- nchekwa nchekwa 7-8 Celsius C na-akwalite nhazi nke obere ome (apical dominance, poteto mbụ);
- okpomọkụ 8-12 Celsius C ruo izu abụọ tupu ị kụọ n'oge germination nke ịgha mkpụrụ, nri na mmepụta ihe mmepụta ihe nke poteto;
-Anya ujo rue 15-20 Celsius ato n’ime ubochi ano rue n’abali ato tupu ikuwa ka ha mee ka ogwu buru ibu. Ma emela ngwa ngwa ka ọkụ, ma ọ bụghị ya, tubers nwere ike igbochi ike metabolism;
- iru mmiri na-egbochi bacterioses, na-eme ka mmetụta nke okpomọkụ dịkwuo elu, iru mmiri sitere na 85 ruo 90% bụ ezigbo.
- ọkụ na-egbochi uto nke ihe opupu ogologo, na-eme ka germination na-eme ka ìhè na-etolite ntụkwasị obi, mkpụmkpụ pupụta na-enye ọtụtụ ọkụ;
- oge tupu ịmalite ịmalite dịgasị iche dabere na iche iche;
- nnukwu tubers na-agbapu ngwa ngwa karia ndi pere mpe;
- too ogologo tupu germination oge - kwa n'oge tuber guzobe, ala viability.
- oke mkpụmkpụ nke mbido germination - mbubreyo guzobe tubers, ezughi oke ntozu okè.
Nchịkọta dabere na ebumnuche maka ịmị mkpụrụ nduku (lee esereese):
Oge nduku. N'oge akuku na tuber, ọ bụ ihe na-achọsi ike ka ọ bụrụ naanị ole na ole na-epulite, nke mere na nnukwu tubers ngwa ngwa na-etolite mgbe akuku. Maka nke a, okpomọkụ nke nchekwa ogologo oge kwesịrị ịdị site na 6 ruo 8 Celsius C na germination ruo ogologo oge (ụbọchị 35-70, dabere na ụdị dịgasị iche iche) na okpomọkụ nke 10-12 Celsius.
Mbadamba tebụl na poteto maka nhazi ọrụ. Site na oge ịkụ, ọ dị mkpa iburu ọnụ ọgụgụ buru ibu nke Ome. Oge nchekwa site na 3 ruo 5 Celsius na oge mkpụrụ tozuru oke (ụbọchị 30-60) na 10-12 Celsius. Ọzọ: okpomoku okpomoku dị na 15-20 Celsius.
Mkpụrụ nduku. N'oge akuku, onu ogugu nke ukwu (Ome) kariri. Ochekwa nchekwa site na 3 ruo 5 Celsius C na obere mkpirisi (ụbọchị 20-40) na 10-12 Celsius.
Teknụzụ Germination. Ihe kariri akacha eji esi ya na igbe na n’ime akpa. Heightdị dị elu na olu nke ime ụlọ ahụ nwere mmetụta dị egwu na ịdị n'otu nke microclimate na ikike ijikwa ikuku. Ohere ole na ole nke oghere efu kwesịrị ịdị elu nke ọtụtụ igbe, ihe dị ka ¼ nke ịdị elu nke ụlọ ahụ. Roomslọ ndị dị ntakịrị na-ekpo ọkụ ngwa ngwa ma ha ga-enweriri nnukwu ikuku iji gbochie nkewa. N'iji ihe ngosi fim, enwere ike ekenye oghere ndi mmadu n'otu n'otu ka o wee nwee ike ịza ihe omume di iche iche. Mkpa ebe germination bụ 10 m2 kwa 1 ha, karị, 1000 m2 kwa 100 ha. Ọ bụ enweghị oghere na-akachasị oke nke germination.
Iji melite ìhè ikpughe maka etịbe nduku, ọ na-ukwuu na-atụ aro iji ọhụrụ pụrụ iche transperent igbe. A na-eji plasti transperent mee ha, nwee akụkụ nkenke, na ọtụtụ oghere. Iji mee ka ọtụtụ ọkụ gafere n'ime igbe ahụ, ịkwesịrị idobe anya dị ka o kwere mee n'etiti igbe abụọ guzo otu n'elu nke ọzọ - ma ọ dịkarịa ala 12-15 cm. Elu nwụnye nke igbe ndị ahụ kwesịrị ịdị ka ịdị elu nke oriọna ọkụ ahụ (1,2 ma ọ bụ 1,5 m ). Site na ndokwa a nke igbe pụrụ iche, ịnwere ike ịnweta ọkụ ọkụ siri ike ruo ogologo cm 2. Na akpa, ogologo ahịhịa ahụ dị mma ruru 5 mm. Ndị toro ogologo na-agbaji mgbe ha na-atọfu akpa ndị ahụ.
Ikuku ìhè bụ otu n’ime ihe kachasị mkpa na germination. Ọ dị mma ka ihe dị ka elekere 15 kwa ụbọchị. Ojiji nke eke nwere ike ime mgbe germinating na griin haus. Ọkụ ọkọlọtọ ọkọlọtọ na 5 Celsius C na-ewepụta ọkụ ọkụ 60% n'ihi na ezubere maka gburugburu ọrụ. Maka ọkachamara na-epupụta na poteto, a na-eme oriọna pụrụ iche na-arụ ọrụ pụrụ iche nke Potatolight, nke emere maka ịrụ ọrụ na obere okpomọkụ, na-ebelata ike oriri site na 4 ugboro. Foto dị n'aka nri nke NEU na-egosi ọkụ ziri ezi n'oge germination.
Okpomọkụ bụ oke ihe dị mkpa maka njikwa germination. Iji mezuo ogologo ahịhịa chọrọ site na ụbọchị ahọpụtara ahịhịa, a ga-ahụrịrị ọdịiche dị iche iche na ọnọdụ okpomọkụ. Enwere ike idozi ọnụọgụ germination na ọnọdụ okpomọkụ. Ọ dịkwa mkpa ịnọgide na-enwe edo edo kwa ụbọchị na n'ogo dị iche iche nke igbe dị iche iche. A dobe na okpomọkụ dị nnọọ ike n'isi ụtụtụ (n'okpuru 3 Celsius C abụghị ihe na-achọsi ike maka epulite). Ya mere, a ga-enwerịrị ime ụlọ ahụ na ikuku ikuku nke ike zuru ezu ka ọkụ wee ghara ịda n'okpuru 7 о C.
Ọdịiche nke okpomoku sitere na 2 ruo 10 Celsius C site na ala ruo na elu nke ndị na-ese mmiri ga-ekwe omume na enweghị ikuku ikuku. N'ọnọdụ kachasị njọ, nke a nwere ike ibute ogologo oge na-ezighi ezi nke ndị puo ma mebie akụkụ ha n'oge ịgha mkpụrụ. Iji wepu nke a, a na-eji akwa dị n'uko nke ike ikuku zuru oke nke nwere ihe mmetụta okpomọkụ. Nke a na-enye nhazi nke ikuku dị ka achọrọ.
Humdị iru mmiri ikuku kachasị maka ịmị mkpụrụ sitere na 85 ruo 90%. Mgbe niile n'okpuru 80% - tubers nwere ike ida turgor. Iru mmiri na-adịgide adịgide karịa 95% bụ ihe dị ize ndụ karị, na-akpalite ọdịdị nke oghere na tubers na oke okpomọkụ ma na-eduga mmepe nke ọrịa fungal na nje, karịsịa scab na fusarium. Oke iru mmiri na-eduga na ịkpụ mkpọrọgwụ na ala nke puru iche, nke na-ebute nsogbu n’oge ịgha mkpụrụ. Mgbanye siri ike na-egosi iru mmiri dị oke elu.
Ọ bụrụ na mkpụrụ osisi ahụ apụta n'oge ma dị ogologo karịa, a ga-ewepụ ha. Usoro a na-anabata nke ọma site na ụdị ogologo dormancy na ogologo oge germination. N'ọnọdụ ọ bụla, mgbe ị na-ewepụ ihe opupu ahụ, a ga-ahụrịrị ihe ndị a: na mbido mbido na apical achịkwa, izu 2-3 tupu ịgha mkpụrụ, okpomoku adịghị ala karịa 8-10 Celsius C, zere imebi. Mgbe nke a gasị, enwere ike ịga n’ihu na nrịkọ dị 15-18 Celsius C, obere ọkụ na iru mmiri dị elu. Ọ bụrụ na ọnọdụ ihu igwe na-egbu oge ịkụ ihe, a pụrụ iji nwayọ belata germin site na iwetulata ọnọdụ okpomọkụ yana ọkụ ọkụ.
Ahụike Germination. A ga-asacha igwe na akụrụngwa niile na-akụ mkpụrụ akụ ma kpochaa ya n'ụzọ dị mma. Tubersgha mkpụrụ na ọkwa a bụ ihe na-emetuta ọrịa fungal na nje na-efe efe. Iji gbochie mmebi ahụ na ọnya ahụ, ekwesịrị idobe mkpụrụ ọka maka germination na okpomọkụ nke + 10 Celsius C. Iburu ọnụ na ndochi igbe, a ga-ekewa akpa n'ime ụlọ nchekwa. Dustjá tara elu mgbe igbe juru na-agbasa isi ọrịa na-akụ mkpụrụ ma puo.
Ọdịda Germination na rụrụ tumadi maka mmepụta nke oge mbụ nduku. Onye ọ bụla na-epupụta poteto na-akụ na-akụ dị ka n'oge dị ka o kwere omume. Oge ikpebi ihe akuku na ikpe a kpebisiri ike site na njikere nke anụ ahụ na oke ikuku a na-anabata. Ọ bụ ihe na-achọsi ike na ala ahụ ga-abụ ọkọchị, friable na crumbly n'oge mmalite akuku nke nduku, na ala okpomọkụ dị n'elu 5ºC. Iji zere ujo oyi, ịkwanye tubers kwesịrị ịdị na okpomoku nke ala ụbọchị abụọ ruo ụbọchị atọ tupu akuku. Ya mere, ọ dị mkpa iji mee ka ihe ndị ahụ germinated sie ike - iji nagide ha ruo ọtụtụ ụbọchị n'èzí n'oge okpomọkụ na ehihie na abalị.
Akụrụngwa ma sie ike na akuku ihe akuku na anagide ala. Bido na 5ºC, ihe a malitere itolite n’ime ala. Tubersgha mkpụrụ akụ nwere ike iguzo obere oge mkpụmkpụ mmiri. Ala dị n'okpuru 2º C kpatara mbibi nke osisi. N'iji okpomoku dị nso 0º C, mkpụrụ osisi ahụ na-anwụ, ma tuber na-ejigide ikike ịkụ ọzọ. Mgbalị niile na nsona ga-abụ nsogbu mgbe ị ga-alaghachị mgbe ịghasịrị okpomoku subzero kwụsiri ike yana mmiri dị elu nke oke ala. N'ihi ya, amụma ihu igwe ga-adị ogologo oge dị oke mkpa maka ịhọrọ ụbọchị kwesịrị ekwesị maka ịkụnye poteto. Ma ọ bụghị ya, mmụba a na-atụ anya ya na mbido mbụ, ma, yabụ, ọnụahịa a na-ere ere agaghị adị, ọ ga -ewetakwa ego nke mkpụrụ.
Ọnụ ego Germination bụ 15-20 puku rubles / ha. Na 1 ha, igbe mbadamba 200 ka 300 ma ọ bụ akpa 20-24, oriọna pụrụ iche 4 na 8 nwere eriri na eriri ngwa ngwa, site na 8 ruo 12 m ka achọrọ.2 ime ụlọ nwere mgbidi na-acha ọcha, kpo oku, ikuku na ikuku na njikwa iru mmiri. Ọ dịkwa mkpa iji nyochaa ike ọkụ (300 kWh / ha), ụgwọ ọrụ ndị ọzọ. Na akuku ihe omumu, ihe omimi na adilata, odi ezi nma iji uzo ihe eji eme ya. Mkpụrụ akpaghị aka na-anabata mkpụrụ akụ na-akụ naanị mgbe ọsọ ọkụ na-agbadata ma na-akụ tubers ndị ahụ n'obere oyi akwa.
Dika uzo ozo tupu aghapu ahihia, enwere ike ime ka ihe nduku na nduku kpalite ubochi 3-4 tupu akuku. Usoro a dị ka ndị a: kpoo poteto maka ụbọchị 3-4 ruo 15-20 Celsius C, na-eme ka ikuku ventilashị na-eme ka tubers ghara iku ume. Site n 'ikuku ikuku na-ekpo ọkụ na oke nke ngwaahịa a, mpaghara odide nwere ike ịpụta na oke na ngwaahịa oyi, yana ya mmepe skaị ọlaọcha na fusarium. Nanị ịwụnye na ịgbanye igwe na-ekpo ọkụ bụ ezigbo ọrụ. Ọ dị mkpa iji kpo oku na ikuku na-aga n'ihu na ikuku zuru ezu na ikuku iji kesaa okpomọkụ na tubers na nchekwa nchekwa niile. Igwe ọkụ (ujo) bụ ihe a ga-arụ na usoro ọkachamara iji zere ihe ize ndụ nke ikpo ọkụ na odide na-enweghị atụ. N'ihi ikpo ọkụ, site na oge ịkụ, ihe opupu kwesịrị ịpụtarịrị (nke a na-akpọ ntụpọ ọcha), mana ọ dịghị emebi kpamkpam na usoro nke arụmọrụ dị elu. A obere incubation oge enweghị ike inye otu n'oge tuber guzobere dị ka mgbe ogologo germination. Ma Ome pụtara ngwa ngwa, tubers germinate na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke Ome. A ga-atụle ube ọkụ dị ka ụzọ kachasịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịikwaro nke ukwu nke nduku.
Tags: mmụbankwadebe maka ọdịdamkpụrụ nduku na-amị
Canada: Mkpokọ mkpụrụ 2019 nwere ụdị nje virus Y kachakarị n'afọ na-adịbeghị anya